Xplora X5 Ridza smartwatch yevana vadiki | Gadget nhau
Xplora X5 Ridza smartwatch kune vadiki
Miguel Hernandez | 02/04/2021 16:00 | Yakagadziridzwa ku 27/03/2021 18:32 | General, Reviews
Nharembozha uye hunyanzvi tekinoroji, angave mafoni kana chero rudzi rwechigadzirwa chakabatana, ndechimwe chinhu icho nhengo diki dzemhuri dzine hukama nazvo kubvira payakatangwa, zvisinei, kuchine akateedzana ezvigadzirwa senge wearables iyo inopa inonakidza mashandiro mune ino chikamu kune iyo yatingangodaro isu tinogona kupa zvishoma zvishoma mukurumbira.
Ngatitarisei kuti iyi X5 Play ingabatsire sei kuunza rusununguko uye chengetedzo kune vadiki vari mumba, uye nemabatiro aanogona kutora mukana wayo mukushanda kwayo muhupenyu hwake hwezuva nezuva.
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, isu tafunga kuperekedza zvakadzama kuongororwa kwevhidhiyo pane yedu YouTube chiteshi matiri kuzokudzidzisa iwe unboxing kuti iwe ugone kutarisa zviri mubhokisi uye kuti mudziyo uri padyo sei, se pamwe nedzidziso diki matinokuratidza maitiro aunogadzira yako Xplora X5 Tamba kuti ive yakagadzirira kana iwe uchipa iyo kune vadiki kumba. Tora mukana wekunyorera kuchiteshi chedu uye usiye chero mibvunzo mubhokisi remashoko.
3 Kutaurirana uye kwenzvimbo
4 Goplay: Ita kuti ifambe
Sechigadzirwa chakagadzirwa chevakomana nevasikana icho chiri, isu tinowana rubbery plastiki sechinhu chikuru chinhu. Izvi zvichave zvakanaka nekuda kwezvikonzero zviviri, chekutanga ndechekuti zvinodzivirira vana vadiki kuti varege kuzvikuvadza nayo, nenzira imwechete iyo ichaita kuti ive chigadzirwa chinopesana zvakanyanya. Mukukosha, chishandiso chinopihwa neruvara mutema, kunyangwe isu tichigona kusarudza iyo trim inoiperekedza pakati pebhuruu, pingi uye nhema, pamwe nezvimwe zvidiki zvidiki pane iyo silicone tambo iyo inosanganisira uye iri nyore kutsiva.
Vipimo: X X 48,5 45 15 mamirimita
Weight: 54 gramu
Colors: Dema, pinki uye nebhuruu
Icho chakareruka kune mucheche ane huremu hwakazara hwemagiramu makumi mashanu nemashanu chete, kunyangwe saizi yebhokisi uye zviyero zvaro zvese zvingaite kunge zvakakura. Isu zvakare tine IP54 certification iyo ichavimbisa kuti vanogona kuinyudza, kuisasa uye nezvimwe zvakawanda pasina kutya kuityora. Zviripachena, Xplora uye warandi yayo haina hanya nekukuvara kwemvura, kunyange izvi zvisingafanire kunge riri dambudziko.
Mukati meiyi nguva yekuda kuziva processor inovanda Qualcomm 8909W yakatsaurirwa kupfeka, ichimhanya yetsika vhezheni ye Android uye ne mukana wekuwana 4G uye 3G network Kutenda kune iyo SIM kadhi slot iyo inosanganisirwa muchigadzirwa. Mukati maro mune dzimba dze4GB dzekuchengetedza, Kunyangwe isu tisina yakatarwa dhata nezve iyo RAM, isu tinofungidzira nezvekuita kwemabasa ayo iyo ichagara yakatenderedza 1GB. Panyaya iyi hatina kana zvichemo, sezvawakaona muvhidhiyo.
Saizi yekukura: 1,4 inches
Kugadzirisa kuratidza: 240 x 240 pixels
Camera yakabatanidzwa 2MP
Kune bhatiri isu tine 800 mAh yakazara iyo ichapa zuva rekushandisa kwakazara kana isu tikamisikidza iwo anoshanda anoshanda. Nekudaro, iine chishandiso mune yekumira-nemodi ichakwanisa kutipa mazuva matatu ekushandisa zvinoenderana nemiedzo yedu.
Kutaurirana uye kwenzvimbo
Iyo wachi ine yakasanganiswa GPS system inotsigirwa nharembozha yekubatanidza, yeizvi uye kushandisa kunyorera kweApple neIOS. Iyo nzvimbo yemwana inozoratidzwa munguva chaiyo, uye isu tinotova nemukana wekumisikidza «Nzvimbo Dzakachengeteka», dzimwe nzvimbo dzakasarudzika dzinoburitsa zviziviso kufoni kana mushandisi achipinda kana kuvasiya.
Ichi chikamu chakabatana zvakananga neicho chekutaurirana, sekutaura kwatakaita, wachi iyi yakazvimiririra zvachose uye kana tikaipa sim kadhi Chero ani zvake ane data uye anofona kuwiriranisa anotibvumidza isu kubata iye mudiki nenzira yakapfava uye yakachengeteka. Tinogona kuwedzera anokwana makumi mashanu emvumo yekutaurirana waunogona kutaura naye kuburikidza nekufona kuburikidza neyako yekubata skrini. Zviripachena isu tinogona zvakare kuverenga mameseji uye akasarudzika emojis pane iyo X5 Play.
Iko kunyorera kwakaratidzika kunge kwakanyanya kubudirira, mashandiro acho akanyorovera uye akanyatsobatanidzwa mune akasiyana masisitimu anoshanda, kunyangwe isu takawana zvimwe kushanda kwakanyanya muIOS. Pasina kupokana ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvekutora chimbo, nekuti inzvimbo yetsinga kunyangwe wachi iri yakazvimirira.
Goplay: Ita kuti ifambe
Xplora inosanganisira mune yazvino chizvarwa chizvarwa wachi anoona chiitiko chikuva chinonzi Goplay. Iyi sisitimu yemarekodhi uye zviitiko zvakapihwa muEurope, zvichimisikidza zvakasarudzika nekuda kwekubatana kwayo neSony PlayStation. Vadiki vanozokwanisa kuita kwavo kunetseka uye nokudaro kuwana mibairo.
Xplora App yeIOS.
Xplora App yeApple.
Izvi zvinozovabatsira, chero bedzi isu tichivabatsira mukuita uye ivo vari kugashira danho, kurwisa kungogara.
Kunyanya kufadza inyaya yekuti wachi yacho inosanganisira 2MP kamera, Izvi zvinobvumidza mwana kutora mifananidzo inonakidza uye iwe, kuburikidza neremote control, zvakare tora dzimwe pfuti.
Kudzora kwevabereki kune chinzvimbo chakakura mukati mese software inosanganisirwa nemudziyo uye izvi zvakakosha zvikuru. Wachi iyi inoshandira vadiki senzira yekutanga kuzvipfekedza, nenzira imwechete iyo iyo inotibvumidza isu kunyatso tarisa zvavanoita, zvese maererano nechengetedzo uye kana zvasvika pakurwisa hupenyu hwekugara hwevana, dambudziko rakakosha munguva kumhanya ikoko. Zviri pachena kuti kubva pamisi, iyi X5 Play yakamisikidzwa sechigadzirwa chinonyanya kufadza kumakomuniyoni, uchifunga nezvezera rezvigadzirwa uye zvinhu zvinopihwa.
Isu tinotaura izvozvi nezvezvakakosha, iyo Xplora X5 Tamba inogona kutengwa pa wega webhusaiti webhusaiti kubva ku169,99 euros, mutengo wakasarudzika unopihwa maficha akapihwa.
Yakatumirwa pa: 2 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 27 March we2021
Iko Xplora kunyorera kwakanaka kwazvo
Yakanyatsofungidzirwa kudzora kwevabereki
Zvimwe zvakashata muhukuru
Kwete zvakanyanya kupusa kumisikidza
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Xplora X5 Ridza smartwatch kune vadiki
TCL TS6110, nzira yakachipa yekuvaka imba yemitambo neDolby Audio
HyperX Pulsefire Kurumidza, isu tinoongorora iyi yekupedzisira yekutamba mbeva